Go’aankii lagu kireyn lahaa qeyb ka mid ah Tiyaatarka Qaranka oo la joojiyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Go’aankii lagu kireyn lahaa qeyb ka mid ah Tiyaatarka Qaranka oo la...
Go’aankii lagu kireyn lahaa qeyb ka mid ah Tiyaatarka Qaranka oo la joojiyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee XF Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa hakiyey ijaarka iyo dib u hawl-gelinta maqaaxida Tiyaatarka kadib cabasho ay ka keeneen Golaha Abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Hobolada Waaberi.
Wasiir Dubde ayaa waxaa la sheegay in isaga oo fulinaya amarka Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ku hakiyay go’aankii dib loogu howlgelin lahaa maqaaxida Tiyaatarka qaranka.
War qoraal ah oo kasoo baxay Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa u qornaa sidan;
“Aniga oo fulinaya amarka Ra‘iisal Wasaaraha JF Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa aan joojiyey dib u hawl-gelinta maqaaxida Tiyaatarka illaa amar dambe kaddib markii laga keenay cabasho ku aaddan dib u furisteeda”
Maanta ayaa waxaa Magaalada Muqdisho gaar ahaan Gudaha tiyaatarka banaanbax ka dhigay Golaha Abwaannada Soomaaliyeed iyo Hobolada Waaberi, iyaga oo sheegay in la iibsaday qeyb kamid ah tiyaatarka taasina aqbaleyn.
Kireynta Tiyaatarka Qaranka